Mitemo yakati wandei inofanirwa kuteverwa mukugadzirwa kwepurasitiki inogadzira muforoma - Aojie Mould Co., Ltd.
Mitemo yakati wandei inofanirwa kuteverwa mukugadzirwa kwepurasitiki inogadzira muforoma
With kuramba kuvandudzika China kuti kugadzira indasitiri, kukura indasitiri ane zvakawanda uye mabasa epurasitiki zvigadzirwa. Kune mirau yakaoma pane zviyero, maratidziro uye kushivirira kwezvigadzirwa. Dhizaini yepurasitiki inoumba muforoma ndeyokuwana epurasitiki muforoma yekugadzira. Sechikamu chakakosha chehunhu, vagadziri vanofanirwa kunyatsogadzira saizi uye zvakatemwa zveforoma, uye zvakare kufunga nezvematambudziko anogona kuitika mukugadzira uye kugadzira maitiro, uye nekunyatsofunga nezve dhizaini dhizaini, kuti ivandudze kubudirira kwehuwandu hwekugadzira .
Naizvozvo, iko kuvandudzwa kweforoma dhizaini danho kwakakosha kwazvo mukuvandudza kwepurasitiki yekugadzira indasitiri. Semugadziri wepurasitiki muforoma, zvinodikanwa kuti unyatsoongorora mitsva dhizaini nemaitiro, nyatso kuongorora matambudziko ekugadzira akasangana nawo, tsvaga mhinduro dzekudzivirira matambudziko. Kudzokororwa, kutora matanho anoshanda ekuvandudza mashandiro uye sainzi yekuumbwa dhizaini, uyezve kugadzirisa dambudziko, kugadzirisa dhizaini kunyatso, kuvandudza kuvimbika kwezvigadzirwa zvepurasitiki, kugadzirisa hupfumi hwezvibereko.
Kune izvo zvikamu zvine hunyanzvi hwehukuru uye chimiro, vagadziri vanofanirwa kunyatsogadzira uye kusangana nezvinodiwa chaizvo. Nguva yekugadzira uye simba rekushandisa kazhinji hazvisi pasi pe p42.5; hukuru hwese iunifomu. Chiyero chezvinhu zvekongiri chinofanira kuve chinonzwisisika, uye chikamu chakanakisa chinogona kunyatso kugadzirisa kusagadzikana kwekongiri. Kutsemuka kunowanzoonekwa muzvivakwa zvekongiri ndeizvi: kutsemuka kwetembiricha, kutsemuka kwekutsemuka, kutsemuka kwekugara, kutsemuka kwekutsemuka zvichingodaro. Icho kutonhora kwakanyanya kwazvo muzhizha. Paunenge uchisimbisa kongiri, pfapfaidza mvura munguva yekuona kuti pamusoro pacho panochengetwa pakanyorova.
Matambudziko makuru akasanganikwa nawo mukuita kwepurasitiki kugadzira dhizaini dhizaina hazvina kukwana kuti vagadziri vatsauke kubva pane zvakajairika dhizaini. Mukuita kweforoma dhizaini, vagadziri veforoma havana mitemo yekuomesa uye yakajeka mirairo yekuumbwa uye kugadzira. Naizvozvo, dhizaini yevamwe vagadziri haina kuyerwa neyakaenzana muyero. Nekuwedzera uye zvakanyanya kushandiswa kwepurasitiki zvigadzirwa, iko chaizvo zvinodiwa zvepurasitiki zvigadzirwa zvinoshandiswa mune dzakasiyana zviitiko zvakasiyana zvakare.